गृहमन्त्रीलाई गगन थापाको प्रश्न–बम दिदीबहिनीका पक्षमा किन प्रधानमन्त्री बोल्नु भयो ? – YesKathmandu.com
गृहमन्त्रीलाई गगन थापाको प्रश्न–बम दिदीबहिनीका पक्षमा किन प्रधानमन्त्री बोल्नु भयो ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद गगन थापाले निर्मला हत्या प्रकरणमा आशंकित बम दिदि बहिनीका बिषयमा अभिब्यक्ति दिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घटनालाई प्रभावित गरेको आरोप लगाएका छन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल मार्फत थापाले प्रधानमन्त्री ओलीले किन बम दिदिबहिनीका पक्षमा अभियब्यक्ति दिएको ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए । ब्यवस्थापिका संसदको बैठकमा थापाले निर्मला हत्याकाण्डका आशंकितका पक्षमा प्रधानमन्त्रीले अभिब्यक्ति दिएर घटनालाई प्रभावित गरेको आरोप लगाए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल टेलिभिजनको एक कार्यक्रममा बम दिदि बहिनीका बिषयमा अभिब्यक्ति दिएका थिए । तर उनले कुनै माथी अपराध प्रमाणित नभएसम्म आरोप नलगाउन प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेका थिए । तर त्यसलाई अहिले विरोधको कडी बनाएको छ । बैठकमा नेपाली कांग्रेसका अर्का सांसद अमेशकुमार सिंहले निर्मला हत्याकाण्डमा शक्तिशाली हत्यारा भन्ने चर्चा सुनिन्छ, ति हत्यारा को हुन् ? भनि प्रश्न गरेका थिए । सांसद दुर्गा पौडेलले पनि बम दिदि बहिनीलाई छानविनको दायरामा किन नलाएको भन्दै गृहमन्त्रीसँग प्रश्न सोधेकी थिइन ।
विहीबार नेपाली कांग्रेसले निर्मला हत्याप्रकरणका बिषयलाई लिएर संसद अवरुद्ध गरेको थियो । हत्या प्रकरण बारे संसदलाई जानकारी गराउन सभामुख कृष्णबहादुर महराले रुलिङ गरेका थिए । सभामुखको रुलिङपछि शुक्रवार गृहमन्त्री थापा संसदका दुवै सदनमा उपस्थित भएका थिए ।